के महिलाको अस्तित्व उसको योनीमा छ? – onlinedarpan:
Posted on December 7, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 115 Views
विमला बज्राचार्य । छोरा होस् या छोरी, किशोरावस्थामा पुगेपछि बिस्तारै सबैको शरीरमा शारीरिक परिवर्तनहरु आउने गर्छन्। किशोरीहरुको हकमा कुरा गर्दा, उसको बढ्दै गरेको स्तन र परिवर्तन हुँदै गरेको उसको शारीरिक आकार प्राकृतिक प्रक्रिया हो। वास्तवमा महिलाको स्तन, यौनाङ्ग केवल शरीरका केही अङ्ग मात्र नै हुन्।
प्राकृतिक रुपमा हरेक मानिसको यौनिकता, सृष्टिको एक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि त्यही स्तन, त्यही यौनाङ्गले महिलाको लागि पलपल ज्यानको जोखिम खडा गरिदिएको हुन्छ। नेपालमा व्याप्त कुप्रथा तथा संकुचित सोचहरुले वास्तवमा महिलालाई महिला भएर बाँच्न पनि दिएको छैन। यो महिला माथि हुँदै आएको लैंगिक विभेद, सामाजिक अन्याय तथा मानव अधिकारको हनन हो।
महिलालाई सृष्टिको सुन्दर सृजनाको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले महिलालाई धेरैजसो फूलसँग दाँज्ने गरिन्छ। साहित्यकारहरुले दिएको परिभाषा अनुसार महिला भनेको गुलाबको फूल र त्यसमा भएको काँडालाई चाहिं पुरुषको संज्ञा दिएको छ, जसले त्यो कोमल गुलाबको फूलको पहरेदारी गर्दछ।
यसै सन्दर्भमा विलियम ब्लेकले लेखेको कविता ‘सिक रोज’ संग हाम्रो समाजको प्रसङ्ग जोडेर केही ब्याख्या गर्नु पर्दा; पितृसत्तात्मक सोचले जकडिएको नेपाली समाजको परिवेशमा कति खेर मानवरुपी पुरुष जो हाम्रा घरका सदस्य हुन्, जो हाम्रा मित्रहरु हुन्, जो हाम्रा रक्षक हुन्, भक्षकको रुपमा उभिदिन्छ्न्, एकै निमेषमा त्यो काँडा भमरा बनेर आइदिन्छन्, पत्तै पाउदैनौं। भलै फूलहरुको रानी गुलाबमा भएको काँडाले उसलाई टाढाबाट टिप्न अनि चुँडाउन खोज्नेहरु बाट त जोगाउन सकिएला एउटा पहरेदारको रुपमा तर उसको वरिपरि बस्ने, उसलाई माया गर्ने भन्ने भमरा बाट चाहिँ कसरी जोगाउने? आँखामा छारो हानेर हुरीजस्तै गरी बेतोडले उसलाई चुस्न आउने, उसको रस पिउन आउने अनि त्यसपछि बेरस छाडिदिने त्यो भयानक जीवदेखि चाहिँ कसरी जोगाउने?
यतिखेर म सम्झिँदै छु कन्चनपुरमा भर्खरै घटेको घटना, जहाँ १३ बर्षीय अबोध बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरी त्यो हिलाम्मे उखुबारीमा फ्याँकिदिएको। कहालीलाग्दो लाग्दो त्यो दृश्य हेर्दा लाग्छ उसको आत्माले हामीलाई कहिले माफ गर्ने छैन तर हामीसँग प्रायश्चित गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय पनि छैन। किनभने हामीले आफ्नै सोचले बनाएको समाजले उसलाई सुरक्षितसाथ हिँडडुल गर्न पाउने वातावरण बनाउन सकेनौं। ती बालिकाको हत्यासँगै हाम्रो पनि थोरै हत्या भएको छ।
उसको मृत्युसँगै सारा नेपाली चेलीहरुको मन पनि विचलित भएको छ। उसको बलात्कार अनि हत्याले हाम्रो मथिंगल पनि विक्षिप्त भएको छ र त्यहाँभित्र धेरै विचारहरुले आन्दोलन गरिराखेका छन्।
साँच्चै भन्ने हो भने समाजले बनाएको परिभाषामा र वास्तविकतामा आकाश जमिनको फरक छ। त्यसको प्रमाण भर्खरै कन्चनपुरमा भएको घटनाको ती बालिका र उनीजस्तै कैयौं बालिकाहरुको कथाहरुले छर्लङ्ग पारिदिएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि सबै पुरुषमा रावणरुपी राक्षसले बास गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संघको तथ्यांक अनुसार के देखिन्छ भने, ३८ प्रतिशत हत्या गरिएको महिलाहरुको हत्यारा उसको आफ्नै आत्मीय पुरुष हुने गरेको छ। सबै पुरुष रावण हुँदैनन्, तर ती रावणहरुलाई परास्त गर्न रामहरु युद्धमा होमिनु पर्दछ। “He for She” भन्ने नाराका साथ हिंसामुक्त समाजको लागि पुरुषहरु पनि अग्रसर हुनु पर्दछ।
नेपालमा महिलाको अवस्था देख्दाखेरि मेरो मनमा केही प्रश्न उठ्ने गर्छन्। आखिर महिला भनेका हो हुन्? महिलालाई किन संरक्षणको आवश्यकता छ? महिलालाई मात्र किन जहिले समय, काल, परिस्थिले जकड्दछ? महिलालाई कोदेखि डर छ? महिला कोसँग र किन सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्दछ? त्यही ठाउँमा पुरुष हुँदा न उसलाई राति परेकोमा डर, न उसलाई अपरिचित व्यक्तिसँग हिँड्नु पर्दाको डर, न उसलाई समय, काल, परिस्थितिको डर। के एउटा पुरुषलाई चाहिँ सुरक्षाको डर हुँदैन? के उसलाई चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्दैन? पक्कै पनि पुरुषलाई पनि सुरक्षित हुनुपर्दछ, सुरक्षित भएर हिँड्डुल गर्न पाउनु उसको मानव अधिकार हो।
त्यस्तै महिलाको पनि सुरक्षितसाथ हिँड्डुल गर्न पाउनु उसको मानव अधिकार हो। तर यहाँ महिला अनि पुरुषको सुरक्षाको कुरा आउँदा त्यहाँ थोरै तर महत्वपूर्ण अन्तर छ। यहाँ हत्या पुरुषको पनि हुन्छ तर उसको हत्या लुटपाटमा, सामूहिक झगडामा हुने गर्दछ। यसको विपरित जब महिलाको कुरा आउछ, उसको हत्या र उसमाथि हिंसा परिवारको आफ्नै सदस्यबाट वा परिवारका अति निकट साथीभाइबाट भएको हुन्छ। अझ त्यसमाथि महिलाको हत्याको कारण उसको यौनिकता बनिदिन्छ।
त्यही यौनिकता जसले यस सृष्टिमा मानव जीवनको निरन्तरता दिन अपरिहार्य भूमिका खेलेको हुन्छ। महिलाका उठेका स्तन, फैलिएका पुठ्ठा र यौनाङ्गलाई मातृत्वको परिचायक भन्दा पनि यौनिकताको आकर्षणको रुपमा विश्लेषण गरिन्छ। अझ त्यहीमाथि महिलाको सुरक्षा, उसको इज्जत, उसको स्वाभिमान अनि उसको अस्तित्व उसको यौनाङ्गमा भएको एउटा झिल्लीमा निर्धारण गरिएको छ। अझ त्यही मात्र होइन, उसको परिवारको इज्जत समेत उसको झिल्लीमा अडेको छ।
महिलाको इज्जतको प्रसङ्ग एउटा सानो सियोको टुप्पोमा गएर अड्किएको छ। शरीरमा भएको एउटा सानो झिल्ली जुन कुनै पनि दैनिक क्रियाकलापले गर्दा नष्ट हुन सक्दछ, त्यसमा गएर महिलाको सुरक्षा अनि इज्जत अड्केर बसेको छ। अनि त्यसमाथि पनि एउटा छोरीले पूरा परिवारको इज्जत धान्नु पर्ने बाध्यता छ त्यो पनि त्यही झिल्लीको आडमा जसलाई नेपालीमा कौमार्य अनि अंग्रेजीमा भर्जिनीटि (Verginity) भन्ने गरिन्छ।
महिलाको सुरक्षाको सामाजिक परिभाषामा अर्थात् माथि वर्णन गरिएको फूल र काँडाको प्रसंग जोड्ने हो भने, खै कहाँ छन् त महिला सुरक्षित? जसलाई संरक्षक बनाइदिएको छ, त्यसैबाट महिला असुरक्षित छ भने कसरी त्यहाँ एक पुरुषले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दछ? एउटा हुर्केको छोरी भएको घरमा सबै जसो आमा बुवाहरु भन्ने गर्छन्, ‘हेर छोरी काल, जमाना, परिस्थिति ठिक छैन धेरै टाढासम्म एक्लै नजानू, धेरै अबेर सम्म बाहिर नबस्नु, समयमा घरमा आउनू।’ अनि फेरि भनिन्छ, ‘छोरी अपरिचितसँग कुरा नगर्नू।’ तर के गर्नु, आफ्नै जन्म दिने बुवा, शिक्षा दिने हजुरबुवा, माया गर्ने काका, सधैँ साथ दिने दाजुबाट बलात्कृत हुन पुग्छौं। आफूले सधै चिनेको, देखेको छिमेकी, आफन्त र इष्टमित्रबाट बलात्कृत हुन पुगेका हुन्छौं।
महिला हिंसामा पर्नु भनेको सर्वप्रथम त महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिनु हो। महिलालाई कुनै व्यक्तिले गरेको दुर्व्यवहारभन्दा पनि महिलालाई समाज र राष्ट्रले गरेको दुर्व्यवहार हो। महिलालाई एक विवेकशील प्राणीको रुपमा भन्दा पनि उपोभोग गर्ने वस्तुको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। जब मानव अधिकार आयोगले महिलाका मुद्दा पनि मानव अधिकारको रुपमा वर्णन गर्न थाले, तबदेखि मात्र महिलाको पनि मानव अधिकार छ है भन्ने बिषय उठान हुन पुग्यो। महिला पनि पुरुष जस्तै एउटा प्राणी हो, जसले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार समाहित गर्दछ।
त्यसमाथि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षा अनि मानव अधिकारको विषय झन् छायाँमा पर्ने गरेको छ। समाजले परिभाषित गरेको लैंगिकताको घेरामा नपर्ने, समाजबाट अस्तित्व स्वीकार्य नभएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिहरु माथि हुने विभिन्न प्रकारको यौन हिंसा भने गुपचुपमा नै सकिने गर्दछ। सामाजिक घेरामा अस्तित्वको लागि अस्वीकार्य व्यक्ति यौनको लागि उपभोग्य वस्तुको रुपमा भने जहिले स्वीकार्य हुने गर्दछ।
उनीहरुलाई आत्मसात गर्नका लागि, भएको सम्बन्ध उजागर गर्न हिम्मत देखाउन नसक्ने व्यक्तिहरुबाट बढी प्रताडित छन् र समाजको तेस्रो दर्जाको नामकरण गरी ‘तेस्रो लिंगी’ मा सीमित राखिदिएका छन्। फरक व्यवहार चाहिँ स्वीकार गर्न नचाहने तर आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने अनि उल्टै “छक्का” जस्ता अपशब्दले दुर्व्यवहार गर्ने हाम्रो समाजका पहिलो दर्जाका अगुवाइबाट परिस्कृत भएको व्यवहार र संस्कार कतिको समाबेशिता र समानता मुलक छ, त्यो आफैँ विश्लेषण गर्न सक्छौं।
जति पनि समाजमा बलात्कार अनि यौन हिंसाहरु महिलामाथि हुने गर्छ, त्यसको अर्को मुख्य कारण भनेको समाजमा भएको एउटा मिथ्या हो। यसले एउटा महिलाको अस्तित्व उसको शरीरको गोप्य अङ्गमा रहेको झिल्लीसँग लगेर जोडेको छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि जब महिला यौन शिकारमा पर्दछिन्, शारीरिक यौन पिडा, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक आघात एक ठाउँमा छ, अर्को ठाउँमा कुरा उठ्छ उसले आफ्नो इज्जत गुमाइन्। उनको अस्मिता समाप्त भयो।
त्यससँगसँगै ऊ कसैको मुख देखाउन लायक भइनन्। परिवारको पनि इज्जत रहेन। समाजको पात्रको एउटा चरित्रले दुख र वेदनाको शोक मनाउँदछ भने अर्को चरित्रले कलंकित बनाउने काम गर्दछ। पीडकलाई सजाय दिनमा जोडभन्दा पनि पीडितलाई अझ बढी कलंकित गर्न समाजका पात्रहरुले चलखेलको सुरुवात गर्छन्।
छोरी मान्छेको इज्जत कौमार्यमा सीमित गरिदिएको हुनाले यदि कसैलाई परिवारको कुनै सदस्यसँग रिस उठेको छ भने त्यस घरको इज्जत छोरी मान्छेमाथि हमला गर्छ। विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाविष्ट समाचारहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश घटना रिसइबीको कारणले गर्दा हुन्छ।
तेस्रो कुरा हाम्रो समाजमा यौन शिक्षाको बारेमा खुलेर चर्चा हुने गर्दैन। जब यस बिषयमा खुलेर चर्चा गरिँदैन तब प्राकृतिक तथा जैविक रुपमा उत्पन्न हुने यौन चाहनाको बारेमा जानकारी पनि हुँदैन। यौन चाहनालाई तृप्त गर्नको लागि बैकल्पिक उपायहरु सोच्न सक्दैनन् र त्यो कुण्ठा बलात्कारको हिंसासँग जोडिन पुग्दछ।
जब त्यो कुण्ठा एउटा मनोबिषादको रुपमा प्रष्फुटन हुन्छ, तब उसले नातागोता, उमेर केही पनि हेर्दैन। त्यसले गर्दा समाजमा एउटा दुधे बालकदेखि लिएर ९० बर्षका हजुरआमासमेत बलात्कारको शिकार हुन पुग्दछ। यी प्रसङ्गहरुले विद्यालयहरुमा सकेसम्म छिटो सानै कक्षा देखि यौन शिक्षा दिनुपर्दछ। यौन शिक्षा दिँदा खेरि यौन इच्छालाई दबाउनु भनेर शिक्षा दियो भने त्यसले नकारात्मक रुप लिन सक्छ। हामीले यौन बिषयलाई स्वास्थ्यको रुपमा, प्रजनन अंगको रुपमा र यौनिकतामा महिला अधिकारको कुरा हो भनेर सिकाउनु पर्दछ।
अहिलेको शिलशिलामा किशोर किशोरीहरुले पोर्न मार्फत यौनका ज्ञान हासिल गर्ने गरेका छन्। पोर्न कदापि यौनको सही सूचना दिने स्रोत होइन, बरु हाम्रो यौन ग्रन्थ “कामसूत्र” हुन सक्ला। त्यसै गरेर यूवट्युब च्यानलमा आउने “सेक्स च्याट विथ पप्पु एण्ड पापा” भन्ने कार्यक्रम उत्कृष्ट हुन सक्दछ, जसमा आफ्नो सन्तानलाई सानै देखि कसरी यौनका शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा देखाइने गरिन्छ।
त्यस्तै यौन शिक्षाको कुरा गर्दा प्रसिद्ध विचारक तथा धार्मिक गुरु ओशो को “सम्भोग देखि समाधिसम्म” भन्ने पुस्तक पनि एक राम्रो स्रोत हुन सक्दछ। उक्त पुस्तकमा यौनलाई अध्यात्मसँग जोडेर राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। धेरै धार्मिक ग्रन्थहरुमा यौन समागम नगर्नु भनेर ज्ञान दिने गरिन्छ तर जे सिकाए पनि मानिसहरुले यौनक्रिया गर्छन् नै, चाहे त्यो हस्तमैथुन होस् वा बलात्कार। ओशो को उक्त पुस्तकमा स्वस्थ यौन सम्बन्ध र आफ्नो सहमित्रप्रतिको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्दछ भनेर राम्ररी ब्याख्या गरिएको छ।
अब चौथो कुरा, यदि कसैको बलात्कार हुन्छ भने समाजले र राष्ट्रले त्यो बलात्कारीलाई र बलात्कारको शिकार भएकी पीडितलाई कसरी व्यवहार गर्दछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली समाजमा यदि कुनै महिलाको बलात्कार भयो भने उसलाई उसको परिवार, समाज, आफन्तले समेत सामाजिक लान्छना लगाउँछन्।
राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने एक पीडितले सर्वप्रथम उजुरी गर्न जाने ठाउँ भनेको पुलिस थाना हो, पुलिस थानामा समेत जब बलात्कारको घटना प्रहरी प्रसाशनसम्म पुग्दछ त्यहाँ दोहोरो चहलखेल सुरु हुन थाल्दछ। बलात्कारको घटना यति संवेदनशील छ तर अनुसन्धानको क्रममा जब प्रहरीहरु प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्छन्, ती पीडित व्यक्ति झन् हिंसाको चपेटामा पर्दछन्।
जब प्रहरी जो जनताको सुरक्षाको लागि खटेका हुन्छन्, उनीहरुबाट नै सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैनन् भने कसरी एउटा जनताले सुरक्षित भएको महसुस गर्ने? बलात्कारजस्तो संबेदनशील घटनालाई पनि मिलापत्रमा मिलाइदिने, पीडितलाई झन् उम्कने मौका दिने, तारिखमा छोड्न लगाउने न्यायदाताबाट नै पीडित झन् हिंसामा पार्छिन् तब सुरक्षा अनि न्यायको लागि कता जाने? कसको ढोका घच्घच्याउने? कानुन जतिसुकै कडा बनाए पनि मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा जाँदा जुन किसिमको तनाव, असुरक्षा अनि आर्थिक चलखेलमा वास्तविक कुरालाई बंग्याइदिने, प्रमाण नष्ट गरिदिनेदेखि लिएर साक्षीलाई डरत्रास देखाएर बयान फेर्न लगाउनेजस्ता कार्यले पीडित झन् पीडामा पर्छ।
महिलामाथि हुने कुनै पनि यौन दुर्व्यवहारलाई राज्यविरुद्धको जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ। बलात्कारीहरुलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय दिइनुपर्दछ। न्याय प्रक्रियामा जाँदा पीडित अनि साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्था, न्याय सम्पादन प्रक्रिया इमान्दारपूर्वक गर्न सके पीडितले न्याय पाउने थिए। बल्ल हिंसामुक्त समाजको लागि सकारात्मक सन्देश जाने छ।
अर्को महवपूर्ण कुरा, महिलाहरुको अस्तित्वको खोजी उसको यौनाङ्गमा हुने झिल्लीसँग जोडिनु हुँदैन। महिलाको हकहित, सुरक्षा, सम्मान र मानव अधिकारको लागि हामी सबै जनाले हाम्रो सोचहरुलाई फराकिलो बनाउँ, कृपया हामी सबैजना महिलाको यौनाङ्गमा हुने झिल्ली “भर्जिनिटी” बाट बाहिर आऔं।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, पुरुषहरुले महिलाहरुको सुरक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने सोचलाई परिमार्जित गरी महिलालाई आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक र नैतिक रुपमा सबल बनाऔं। एउटा हिंसारहित सुन्दर र समानता मुलक समाजको लागि हरेक महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सबैले प्रतिबद्धता जनाऔं। साभार-बुलबुल नेपाल
Share21TweetGoogle+Pin021sharesकार्ल माक्र्सले सन् १८७९ जुन ९ मा अमेरिकी रिपब्लिकनहरुले सञ्चालन गरेको एक पत्रिकाका लागि आफ्नो जीवनकालको सबै भन्दा लामो र महत्वपूर्ण अन्तर्वार्ता दिएका थिए । अमेरिकन पत्रिका chicagotribune.com का एक सम्वाददाताले कार्ल माक्र्ससँग उनको लण्डनस्थित आफ्नै घरमा यो अन्तर्वार्ता लिएका थिए । यस पत्रिकाले कार्ल माक्र्सका हरेक रचनाले उनलाई विश्व षड्यन्त्रको मास्टर माइण्ड, वौद्धिक, राजनीतिक विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…